Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာ(ငလိမ်ဂျာ)အပေါ် တိုင်းရင်းသားတို့ အမြင်
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 7:57 PM
Labels: သတင်း, သမိုင်းဆိုင်ရာ
ရခိုင်ချစ်သူချေ.. A sweet Fashion Show trailer ... very nice, why you did not use some Rakhine Beauties to make it more attractive.. Don't be smart, no one is sleeping. These all Old useless Records, wasting the time....
yes calling ရိုဟင်ဂျာ / ငလိမ်ဂျာ ..any thing, Reality can't be disappear..You all Bengali-Buddhists will be in the target to lost your own race. Finally it can go to slave life again......
အဖေသားလေး သီးဟထွန်းဇော် လိမ်မာသွားပြီး ဒါမှငါ့
ကိုယ်မေကိုယ်လိုး ခွေးကုလား ဘင်ဂါလီတွေ
မင်းတို့အတိတ်သမိုင်းဟာ မကောင်းသလို မင်းတို့အနာဂါတ်လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး မင်းတို့စောက်ကျင့်မကောင်းလို့ မင်းတို့ခုလို ရုပ်ရည်နဲ့ အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေတာ မင်းတို့ကို ခွေးတောင်စားမှာမဟုတ်ဘူး မင်း တို့ဟာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ ခေါ်တောကုလားဖြစ်ရတာ သံဝေဂမရတဲ့အပြင် စောက်ဖုတ်ကို အလာဆိုပြီး ဦးတိုက် ကိုးကွယ်သေးတယ် မင်းတို့ငြင်းမလားမင်းတို့အလာ အရှင်ပုံဟာ ဘာပုံလဲဆိုတာမင်းတို့ခေါင်းမှာဆောင်းတာ
ဘာလဲ မင်းတို့ငြင်းမလား မင်းတို့ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတာ နိုင်ငံတကာက
သိနေပြီ မင်းတို့အဆင့်အတန်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
ခွေး= ရိုဟင်ဂျာ (၀ါ) တိုင်းတပါးသား(၀ါ) ဘင်္ဂလီကုလား ခေါတော (၀ါ) အမျိုးယုတ်ကုလားစုတ်
မှတ်ချက်။ ။ဘယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမှ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ မျိုးယုတ်ကုလားများအားအသိအမှတ် မပြု (မပြု)